Imaamka Masjidka Stockholm oo cambaareeyay qaraxyada | Somaliska
Imamka masjidka Medborgarplatsen ee ugu weyn Stockholm Imam Hassan Moussa, ayaa cambaareeyay weeraradii shalay maqribkii ka dhacay Stockholm asagoo imamku sheegay in degenaanshaha iyo amaanka Sweden uu yahay waajib diini ah. Imaamka ayaa qoraalka uu u diray wakaalada wararka TT ku sheegay "Dhamaan weerarada, cabsi galinta iyo qalalaasaha lagu qaado dadka aan waxba galabsan sababkasta haloo yeelee in uu cambaareynayo". Booliska Sweden ayaa ku dhawaaqay in weerarkii shalay ka dhacay Stockholm ee uu 1ka qof ku geeriyooday uu ahaa mid argagixiso ayagoo sheegay qofka geeriyooday in uu ahaa midkii rabay in uu is qarxiyo. Wakaalada wararka TT ayaa soo tabisay in ay heshay10 daqiiqo ka hor qaraxyada fariin digniin ah oo ku socota Sweden taasoo loogu baaqayo in ay ciidankooda kala baxaan Afghanistaan iyo in la joojiyo aflagaadada lagu hayo Nabiga (SCS).
Imaamka Masjidka Stockholm oo cambaareeyay qaraxyada
Imamka masjidka Medborgarplatsen ee ugu weyn Stockholm Imam Hassan Moussa, ayaa cambaareeyay weeraradii shalay maqribkii ka dhacay Stockholm asagoo imamku sheegay in degenaanshaha iyo amaanka Sweden uu yahay waajib diini ah.
Imaamka ayaa qoraalka uu u diray wakaalada wararka TT ku sheegay “Dhamaan weerarada, cabsi galinta iyo qalalaasaha lagu qaado dadka aan waxba galabsan sababkasta haloo yeelee in uu cambaareynayo”.
Booliska Sweden ayaa ku dhawaaqay in weerarkii shalay ka dhacay Stockholm ee uu 1ka qof ku geeriyooday uu ahaa mid argagixiso ayagoo sheegay qofka geeriyooday in uu ahaa midkii rabay in uu is qarxiyo.
Wakaalada wararka TT ayaa soo tabisay in ay heshay10 daqiiqo ka hor qaraxyada fariin digniin ah oo ku socota Sweden taasoo loogu baaqayo in ay ciidankooda kala baxaan Afghanistaan iyo in la joojiyo aflagaadada lagu hayo Nabiga (SCS).
9 bilyan oo lagu bixinayo arimaha Socdaalka
Nyamko Sabuni oo is casishay
Cabsi galin bambo oo ka dhacday Stockholm